Kudzivirira rendi | Law & More B.V. | Eindhoven uye Amsterdam
Blog » Kudzivirira rendi
Kana iwe uchihaya pekugara muNetherlands, unobva waita kodzero yekurendesa dziviriro. Izvi zvinoshandawo kune vako vaunogara navo uye masisitendi. Pamwechete, kudzivirirwa kwerendi kunosanganisira zvinhu zviviri: kudzivirirwa kwemutengo wekurenda uye kudzivirirwa kwerendi kubva pakubviswa kwechibvumirano chevaridzi nepfungwa yekuti muridzi wemba haangogumise chibvumirano chekugara. Nepo zvese zviri zviviri zvekuchengetedzwa kwemaroja zvinoshanda kune maroja edzimba dzekugara, izvi hazvisizvo kune varidzi vedzimba mune yemahara chikamu. Iko kudzivirirwa kwekurenda kuri kukanganiswa riini uye chii chaizvo kudzivirirwa kwemutengo wekurenda kana kudzivirirwa kwemaroja muchirevo chekumiswa kwechibvumirano, zvinokurukurwa mune ino blog. Asi kutanga, iyi blog inokurukura mamiriro anonzi nzvimbo yekugara yekushandisa kwese kwekudzivirira kwemaroja.
Nekushandisa kwezvisungo zvemutemo zvine chekuita nekudzivirirwa kwemaroja, chinofanirwa kutanga chikave mubvunzo wenzvimbo yekugara. Sekureva kweChinyorwa 7: 233 cheDutch Civil Code, nzvimbo yekugara inofanirwa kunzwisiswa kureva chivakwa chisingazungunuke zvivakwa sezvo ichirojerwa seimba yakazvimiririra kana isiri yega, karavhani kana seti yakagadzirirwa kugara zvachose. Hapana kumwe kusiyanisa kunoitwa pakati pevaridzi venzvimbo dzekuzvimiririra kana dzisiri-dzega dzimba dzekuchengetedza rendi.
Pfungwa yekugara nzvimbo inosanganisirawo zvisingazungunuke zvinhu, mune mamwe mazwi zvivakwa izvo nemasikirwo azvo zvakabatana zvisingaite neimba, karavhani kana pani kana izvo zviri chikamu chayo nekuda kwechibvumirano chekurenda. Munzvimbo dzakaomarara dzekugara, izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, masitepisi, maburi uye makoridho pamwe nekuisirwa kwepakati kana akasarudzwa nechibvumirano senzvimbo dzisina hunhu hweveruzhinji.
Zvisinei, hapana nzvimbo yekugara mukati mezvinoreva Chikamu 7: 233 yeDutch Civil Code kana ichinetsekana:
kushandiswa kwenguva pfupi kwenzvimbo yekugara; kunyangwe izvi zviri izvo zvinoonekwa pahwaro hwehunhu hwekushandisa, semuenzaniso seimba yezororo kana imba yekutsinhana. Mupfungwa iyi, nguva ipfupi inoreva kushandiswa uye kwete kune nguva yakabvumiranwa;
nzvimbo yekugara inoenderana; ndozvinoitika kana imba ichibvarirwa pamwe nenzvimbo yekutengesa; pakadai, imba yacho chikamu chebhizimusi renzvimbo yekurendesa, kuitira kuti kwete mamiriro edzimba asi zvisungo zvine chekuita nenzvimbo yebhizinesi zvinoshanda pamba.
igwa reimba; ichi chiitiko chisingakodzere kutsanangurwa zviri pamutemo kwechinyorwa 7: 233 cheDutch Civil Code. Imba yakadai haigone kutaridzwa seyisinga zungunuke imba, nekuti hapana hukama hunogara nevhu kana bhangi.
Kana mamiriro enzvimbo yekugara akatsanangurwa pamusoro akasangana, muroja anotanga kunakidzwa nekudzivirirwa kwemutengo wekurenda. Muchiitiko icho zvinotevera nzvimbo dzekutanga dzinoshanda:
chiyero pakati pehunhu, kusanganisira nzvimbo yenzvimbo yekurendesa uye pakati pemba inofanirwa kubhadharirwa, inofanirwa kuve inonzwisisika;
roja ane sarudzo nguva dzese kuti mutengo wekutanga wekurenda uongororwe neRental Committee; izvi zvinokwanisika mukati memwedzi mitanhatu mushure mekutanga kwechibvumirano; danho reRent Committee rinosunga, asi richiri kuendeswa ku Subdistrict Court kuti riongororwe;
muridzi wemba haagone kuenderera nekuwedzera kusingagumi kwemaroja; Miganhu yakatarwa yepamutemo inoshanda kune iyo kuwedzera kwerendi, senge huwandu hwepamusoro hwekuwedzera kwemitero hwakagadzwa naMinister.
zvisungo zviri pamutemo zvine chekuita nekuchengetedza renti mutemo unosungirwa, kureva kuti, muridzi wemba haangatsauke kubva kwavari muchibvumirano cherease kukuvadza muroja.
Sezvineiwo, zvirevo zvakataurwa zvinongoshanda chete kune roja reimba yekugara. Iyi ndiyo nzvimbo yekugara iyo inowira mukati meyakagadzwa rendi chikamu uye nekudaro inofanirwa kusiyaniswa nenzvimbo yekugara iri yeyakasununguka, kana yemahara rendi chikamu. Panyaya yedzimba dzakasununguka kana dzemahara, rendi yacho yakakwira zvekuti roja haachakwanise kuwana rubatsiro rwemaroja nekudaro rinowira kunze kwekuchengetedzwa nemutemo. Muganhu pakati penzvimbo dzakasununguka nedzemagariro ingangoita pamutengo wekurenda ungangoita mazana manomwe nemakumi manomwe nemaviri euros pamwedzi. Kana mutengo wekubvumirana wabvumidzwa kupfuura uyu mari, roja haachagona kuvimba nemisimboti yakatsanangurwa pamusoro, nekuti zvino zvine chekuita nerendi yeimba yakasununguka.
Rendi yekudzivirira kubva pakubviswa kwechibvumirano chekurenda
Nekudaro, kune chishandiso cheimwe chikamu chedziviriro yerendi, hapana mutsauko unoitwa pakati pevaridzi venzvimbo dzekugara nedzakasununguka. Mune mamwe mazwi, izvi zvinoreva kuti maroja wese enzvimbo yekugara anonyanya kuchengetedzwa kubva pakubviswa kwechibvumirano chekurenda, mupfungwa yekuti muridzi wemba haangogona kudzima chibvumirano chekurenda. Muchirevo chechinyorwa chino, roja rinonyatso chengetedzwa nekuti:
kumiswa nemuridzi wemba hakumise chibvumirano chekugara maererano neChitsauko 7: 272 cheDutch Civil Code; Pamwechete, zviri kumuridzi wemba kutanga atanga kuedza kumisa chibvumirano chekurenda nekubvumirana. Kana izvo zvikasashanda uye muroja akasabvumirana nekumiswa, kumiswa kwemuridzi wemba hakunyatso kumisa chibvumirano chekurenda. Izvi zvinoreva kuti chibvumirano chekurendesa chinoramba chichiita senguva dzose uye muridzi wemba anofanirwa kuisa kudare repamutemo rekubvisa chibvumirano chekurenda nedare repasi. Pakadaro, chibvumirano chekurendesa hachizopera kudzamara dare raita danho risingadzoreke pakumiswa kwemuridzi wemba.
tichitarisa Chinyorwa 7: 271 cheDutch Civil Code, muridzi wemba anofanirwa kutaura chikonzero chekumiswa; kana muridzi wemba achizobvisa chibvumirano chekurenda, anofanirwa kutevedzera zviri muchita chambotaurwa cheCivil Code. Pamusoro penguva yekucherechedza, ivhu rekumisa inzira yakakosha mune ino mamiriro. Muridzi wemba anofanirwa kutaura chimwe chezvikonzero zvekumiswa muchiziviso chake chekumiswa, sezvakataurwa muChitsauko 7: 274 ndima 1 yeDutch Civil Code:
roja haana kuzvibata semuroja akanaka
zvine chekuita rent kwenguva yakatarwa
muridzi wemba anoda chimbi chimbi kuti aishandise
roja haabvumire kupihwa mukana wekupinda muchibvumirano chitsva chekurenda
muridzi wemba anoda kuona kushandiswa kwepasi pane zvakabhadharwa zvinoenderana nehurongwa hwekuenzanisira
zvido zvemuridzi wemba mukumiswa kwechibvumirano zvinopfuura zviya zvevaridzi mukuenderera kwechikwereti (kana muridzi wemba achikweretesa)
chibvumirano chinogona kungomiswa nemutongi pazvikonzero zvakataurwa muchinyorwa 7: 274 ndima 1 yeDutch Civil Code; Idzi nzvimbo dzambotaurwa dzakakwana: ndiko kuti, kana matanho epamutemo akaitwa pamberi pematare, kumiswa kwechibvumirano chekurenda pane zvimwe zvikonzero hazviite. Kana imwe yezvikonzero zvambotaurwa ikamuka, dare rinofanirawo kupa chirevo chemuroja kuti chimiswe. Muchiitiko ichocho, saka hapana nzvimbo ye (kumberi) kuyera zvido. Nekudaro, chisaruro chinoshanda kune ino poindi maererano nekumiswa kwepasi kwekukurumidza kushandiswa kwemunhu. Kana mutongo wabvumidzwa, dare rinotarisawo nguva yekubviswa. Nekudaro, kana chirevo chekumitisa muridzi wemba chikarambwa, chibvumirano chakakodzera hachigone kumiswazve naye kwemakore matatu.
Rental Musika Kufambisa Mutemo
Pakutanga, kudzivirirwa kwerendi kwaiitwa pasi pekushoropodzwa kwakawanda: kuchengetedzwa kwerendi kungadai kwakaenda zvakanyanya uye kune varidzi vedzimba vakawanda vangade kubvarura imba kana dziviriro yerendi yanga isina kunyanyooma. Iyo paramende yakaratidza kuve nehanya nekushoropodzwa uku. Nechikonzero ichi, paramende akasarudza kuunza mutemo uyu kubva musi wa1 Chikunguru 2016, iyo Rental Market Transfer Act. Nemutemo mutsva uyu, kudzivirirwa kwemuroja kwakava kushoma. Muchirevo chemutemo uyu, idzi ndidzo shanduko dzakakosha.
yezvibvumirano zvekurenda zvine chekuita nenzvimbo yekugara yakazvimirira yemakore maviri kana mashoma uye nezvibvumirano zvekuroja zvine chekuita nenzvimbo yekugara isina kuzvimiririra yemakore mashanu kana mashoma, zvakaitwa kuti muridzi wemba aorenda pasina kuchengetedzwa kwemaroja. Izvi zvinoreva kuti chibvumirano chekurenda chinopera nekushanda kwemutemo mushure menguva yakatenderanwa uye haifanire kumiswa nemuridzi wemba sepakutanga.
pamwe nekuunzwa kwezvibvumirano zveboka rakanangwa, zvakaitwawo zvakareruka kuti muridzi wemba agumise chibvumirano chekurenda maererano nedzimba dzinoitirwa rimwe boka rakanangwa, sevadzidzi. Kana roja racho risisiri reboka rakanangwa uye richigona, semuenzaniso, risingazotariswe semudzidzi, muridzi wemba anozokwanisa kuenderera nekumiswa nechikonzero chekushandisa wega nekukurumidza uye nekukurumidza.
Iwe uri roja here uye iwe unoda kuziva kuti ndeipi dziviriro yerendi iwe yaunokodzera? Iwe uri muridzi wemba anoda kugumisa chibvumirano chekurenda? Kana iwe unayo chero mimwe mibvunzo maererano neiyi blog? Wobva wabata Law & More. Magweta edu inyanzvi mumutemo wekurenda uye vanofara kukupai mazano. Ivo vanogona zvakare kukubatsira iwe zviri pamutemo kana yako nharo yekurenda ichitungamira kumatare edzimhosva.
Previous Post Kurambana mumatanho gumi
Next Post Ndeapi kodzero dzako semaroja?